xukumo noqday kuwa dadka raali galiyay - Xogside
Home BARNAAMIJYADA xukumo noqday kuwa dadka raali galiyay
xukumo noqday kuwa dadka raali galiyay
Xaakim Maxkamadda gobolka Ohai ka mid ah, Xaakim Michel Scontine ayaa noqday mid ku riday xukumo aan hore loo arag oo lala yaabay dadkii lagu soo oogay denbiyo kala duwan. Qaadigan ayaa caan ku ahaa inuu Qofka kasta ku xukumo ciqaab la nooca ah denbigiisa.
Wuxuu ku xukumay 7 dhalinyaro ah inay beeraan 70 geed ka dib markii ay gooyeen dhir ku taallay goobaha caamka. Nin dhalinyaro ah oo garaacay Oday da’, ayuu isgana ku xukumay inuu laba bilood ka sheqeeyo xarunta lagu xanaaneeyo dadka waaweyn. Nin sikhaaramay oo bisadiisii ku tuuray moofo uu lahaa ayuu isagana ku xukumay inuu ku quudiyo muddo laba bilood bisadaha beer ku taalla pesnelfeniya. Nin ka xaday cajalad Vedio ah xarun Vedio ayuu isagana ku xukumay inuu muddo laba todobaad ah hortaagnaado xarunta horteeda isagoo haysta boodh ay ku qoran tahay “ Tuugadu waa shaqo Dulli ah”.
Booliiska ayaa soo qabtay nin dhakhtar caan oo markii uu gaadhiga watay sikhraan ahaa, waxaana markii loo keenay uu kala dooransiiyay in la xidho muddo 6 bilood ah iyo inuu muxaadaro ka hadlaysa xumaanta mukhaadaraadka uu u galo ardayda dugsiyada. Xukunadaasi ayaa noqday ku lala yaabay laakiin dadkiisa raali geliyay.
Previous articleSaacad Gudahood Ayuu 12 Milyan Ku helay!
Next articleMadaxweynaha Somailand Oo Kulan La Qaatay Shirguddoonka Golaha Wakiillada.